Danjiraha Imaaradka Carabta oo tegay Garowe & Horumarrinta Puntland oo laga shirayo – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Danjiraha Imaaradka Carabta oo tegay Garowe & Horumarrinta Puntland oo laga shirayo
A warsame 21 May 2014 4 April 2019
Garowe – Mareeg.com: Safiirka dowladda Imaaradka Carabta u fadhiya Soomaaliya, Mohamed Al-Cutmani iyo Ku xigeenkiisa Xuseen Darwiish oo ka tegay Muqdisho, islamarkaana shalay gaaray magaalada Garowe ayaa la kulmay madaxweynaha maamulka Puntland C/weli Maxamed Cali Gaas.
Madaxwaynaha maamulka Puntland, Cabdiwali Maxamed Cali Gaas oo uu wehliyay Madaxwayne ku xigeenkiisa, Cabdixakiin Cabdulaahi Xaaji Cumar Camay ayaa Madaxtooyada maamulka kusoo dhaweeyay waftigaasi ka socday Imaaraadka Carabta ee gaaray Puntland.
‘’Xukuumada Casubi, balan qaadkeedu waxa uu ahaa in Puntland ay u furantahay soo dhawaynta cidkasta oo na taageraysa islamarkaana ay imaan Karaan deegaankeena, maalgashina ku samaynaysa waan soo dhawaynaynaa” ayuu yiri Madaxwaynaha Puntland Gaas.
Madaxwaynaha Puntland Cabdiwali Maxamed Cali Gaas ayaa cadeeyay in dowladaha Puntland iyo Imaaraadka Carabta ay leeyihiin Xiriir ganacsi oo aad u dhow iyo Mid Diblumaasiyadeed oo qotto dheer.
‘’Berri Ambasadorku waxa uu ka qayb galaya shir Puntland iyo Beesha Caalamka uga furmaya Garowe, aad baana ugu faraxsanahay imaatinkiisa” ayuu hadalkiisa raaciyay Madaxwayne Gaas.
Ambassador Mohamed Al-Cutmani, ayaa isna dhankiisa ka mahadceliyay soo dhawaynta loogu sameeyay Puntland, isagoona sheegay in mar walba ay ka go’antahay sii wadida xiriirka wanagasan ee ka dhaxeeya labada Dowladood.
Waxaa maanta la filayaa inuu magaalada Garowe ka furmo shir ay isugu imaanayaan safiirada ka socda wadamada daneeya arrimaha Soomaaliya, hay’adaha deeqda bixiya iyo maamulka Puntland.
Shirweynahan ayaa looga hadlayaa horumarinta iyo dib u dhiska deegaanada Puntland, waana shirkii ugu weynaa sanadkan oo ay isugu yimaadaan hay’adaha caalamiga ah, Safiirada dalalka deeqda siiya Soomaaliya.
Shirkan ayaa looga hadlayaa sidii Puntland gacan looga siin lahaa mashaariicda horumarinta kaabayaasha dhaqaalaha iyo Amniga.
Nigeria: Labo qarax oo dilay 118 ruux (Sawirro)
Shacabka Hiliwaa oo ku wareersan amarrada dowladda iyo Alshabaab